गधा प्रयोग गरेर लक्जरी कार चोरी
१९ श्रावण २०७४
दक्षिण अफ्रिकामा गधा प्रयोग गरेर लक्जरी कार चोरी हुने गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । प्रहरीले चोरी गरिएको एउटा लक्जरी कारलाई गधाको सहयोगमा तानेर जिम्बाबेमा तस्करी गर्ने कोशिस असफल बनाएको छ । प्रहरीका अनुसार कार तस्करी गर्ने कोशिस असफल भएपछि संदिग्ध चोर भने जिम्बाबेतर्फ भागेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा डरबनबाट चोरी भएको एउटा कार पनि यही नदीमा फेला परेको थिया । जसलाई गधाको सहयोगमा नदी…विस्तृत समाचार »
१८ श्रावण २०७४
संसारमा कैयौँ यस्ता ठाँउ छन्, जुन अचम्मका बिशेषताको कारण चर्चित छन् । यस्तो ठाँउमा मानिसहरु जान रुचाउँछन् । यस्तै एउटा ठाँउ छ, न्यूजिल्याण्डको सेन्टर ओटेगो नजिक रहेको कस्बे । जुन १९९९ पछाडि मानिसको आकर्षणको क्षेत्र बनेको छ । यसको कारण यहाँको ब्रा प्रसंशक । अर्थात् यो यस्तो ठाँउ हो, जहाँ स्टाइलिस ब्रा देख्न सकिन्छ । यहाँ आउने महिलाहरु संकेतको लागी आफ्नो ब्रा छोडेर जान्छन् । …विस्तृत समाचार »
सबैलाई आश्चर्यमा पार्ने संसारका यौनसम्बन्धी २५ वटा कानुन
यो संसार विचित्रका कुराहरुले भरिएको छ । यो संसारको अलगअलग स्थानका कानुन पनि अलगअलग छन् । त्यसमध्ये केही कानुन त निकै विचित्रको छ । जुन थाहा पाएर तपाई पनि आश्चर्यमा पर्नुहुनेछ । यहाँ सेक्ससँग सम्बन्धित यस्तै २५ वटा विचित्रको कानुनका बारेमा उल्लेख गरिँदैछ । १. अमेरिकाको एरिजोनामा एक व्यक्तिलाई आफ्नो घरमा दुईभन्दा बढी डिल्डो (कृतिम लिंग) राख्ने अनुमति छैन । २. अमेरिकाकै वाशिंगटन डीसीबासी नागरिकलाई…विस्तृत समाचार »
​विवाहमै बेहुलीले बेहुलामाथि गोली चलाएपछि....
अमेरिकाको टेनेसी प्रान्तमा प्रहरीले एक विवाहको केही क्षणमा आफ्नो श्रीमानलाई गोली हानेर हत्या गरेको आरोपमा एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ। उनले विवाहको केहीबेरमै बेहुलालाई पेस्तोलबाट गोली प्रहार गरेको आरोप लगाइएको छ । २५ वर्षीया केट एलिजाबेथ प्रिचार्डलाई बेहुलीको पहिरनमै मरफ्रेसबोरोबाट हिरासतमा लिएको हो । घटना ३१ जुलाईका दिन भएको हो । एलिजाबेथले कथित रुपमा विवाहपछि आफ्नो बेहुलाको टाउकामा ९एमएम पेस्तोल राखिन् र ट्रिगर दबाइन् ।…विस्तृत समाचार »
संसारका अहिलेका मानिस आफूलाई निकै मोर्डन भएको दावी गर्छन् । त्यसैले कतिपय मुलुक र स्थानमा गे र लेस्बियन हुनुलाई सामान्य रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, अझै कति यस्ता देश छन् जहाँ होमोसेक्सुअलिटीलाई अपराध मानिन्छ । दक्षिण अमेरिकाको इक्वेडरमा यसलाई रोग मानिन्छ । र, यसको उपचार डाक्टरले होइन बरु यातना गृहमा लगिन्छ जहाँ मानसिक रोगीको उपचार गरिन्छ । फोटोग्राफर पाओला परेड्सले इक्वेडरमा गे–लेस्बियनको जीवनमा आधारित…विस्तृत समाचार »
शिक्षिकाले उडिरहेको प्लेनमै विद्यार्थीसँग सेक्स गरेपछि जागिर चट्
एउटा यात्रुबाहक प्लेनको ट्वाइलेटमा एक जना विद्यार्थीसँग शिक्षकले सेक्स गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ । उनीहरु सबै एउटा शैक्षिक यात्रामा रहेको बताइएको छ। यो घटना सार्वजनिक भएसँगै शिक्षकलाई विद्यालयमा पढाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । इंग्ल्याण्डको ब्रिस्टलमा २८ वर्षीया एलीनोर विल्सन फिजिक्स अध्यापन गराउँथिइन । विल्सनले प्लेनमै ती युवाहरुसँग मदिरा सेवन गरेकी थिइन् र त्यसपछि उनीहरुले प्लेनको ट्वाइलेटमा सेक्स गरेका थिए । यो घटना त्यतिबेला सार्वजनिक…विस्तृत समाचार »
१२ श्रावण २०७४
बेलायत निवासी एक अमेरिकी महिलाको मृत्यु १८ महिना अघि नै भएको थियो । तर, उनी १८ महिनापछि घरबाहिर बगैंचामा फूलमा पानी हाल्दै गरेको देखेपछि उनकी छोरी आश्चर्यमा परिन् । यो कुनै कल्पना वा भ्रम थिएन, डेनिस अन्डरहिल नामकी ती महिलाले साँच्चिकै गुगल अर्थमा आफ्नी मृत आमालाई जिवितै देखिकी थिइन् । इन्टरनेट सर्फिङ गर्दैगर्दा जब एक दिन डेनिसले गुगल स्ट्रीट भ्युमा आफ्नो फेलोरिडास्थित घरबाहिर आफ्नी आफ्नी…विस्तृत समाचार »
​एउटा बाजीले बढ्यो ६ फुट कपाल, कस्तो थियो बाजी ?
हरेक महिलाको सपना हुन्छ कि लामो र सुन्दर कपाल होस् । महिलाको सुन्दरताको मापन पनि उसको अनुहार र कपालबाटै मापन गरिन्छ ।जसको जति लामो कपाल छ, उसलाई त्यति नै सुन्दर मानिन्छ । यसका लागि महिलाहरु पनि अनेक उपाय अपनाउने गर्दछन् । यस्तै सपना थियो एक महिलाको पनि। तर कपाल लामो र सुन्दर बनाउने खेलखेलमै उनको कपाल ६ फिट लामो भयो । जुन एक जना पुरुषको…विस्तृत समाचार »
सरकारले केही गरेन त्यो पनि सत्य हो । सरकारमा पुगेकाहरु कसरी कमाउँ भन्नेमै व्यस्त देखिएको पनि बढ्दो भ्रष्टाचारले पुष्टि गरेकै छ । सरकारी कार्यालयहरुमा नियुक्त कर्मचारी काम गर्नेभन्दा काममा कसरी अवरोध सिर्जना गर्ने र कमाउने धन्धामै रहेको सबैको नाङ्गो आँखाले देखिएकै छ । तर, हामी सचेत भनिएका जनताचैं यसमा कति दोषी छौ नि ? चोक होस् कि चियापसल यो नेताले केही गरेन । सरकारले त…विस्तृत समाचार »
संसारकै सबैभन्दा मोटी महिला इमान अहमदले आफ्नो ३ सय किलोभन्दा बढी तौल घटाएकी छन् । तौल घटाएपछि इमानका तस्वीर सार्वजनिक भएका छन् । तस्वीरमा उनलाई निकै सुन्दर देखाइएको छ। इमामलाई जब यही वर्ष फेब्रुअरीमा भारत ल्याइएको थियो, तब उनको तौल ५ सय किलो वरपर थियो । भारतमा सर्जरी गरेपछि उनको तौल २५० किलो भएको थियो । हालै अबुधावीको बुर्जिल अस्पतालमा भएको उपचारपछि उनको तौल १८५…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 12 13 14 15 16 Older Last ›